Wararka - Habka Wax Soo Saarka Shirkadeena
Baakadaha Alaabada Elektarooniga ah
saxanka saxarka saxarka
Saxanka saxarka saxan adag
saxarka saxarka loogu talagalay qalinka haweenta
Qalabka kombiyuutarka saxaarad warqad ah
alaabta kale ee elektarooniga ah saxarka saxarka
Baakadaha Alaabada Macaamiisha
Weelka la tuuro
Saxanka saxarka beerka
Xirxirida saxarka baahiyaha kale ee maalinlaha ah
Sanduuqa hadiyadaha qurxinta ama saxarka saxarka
saxarka saxarka ee hooska isha
Habka Wax Soo Saarka Shirkadeena
Soo-saarista Isku-darka guud ee wax-soo-saarka ayaa ka mid ah diyaarinta saxarka, wax-ka-qabashada, qallajinta, cadaadiska kulul iyo habab kale.
1. Diyaarinta saxarka
Xoqidda waxaa ka mid ah saddexda tallaabo ee alaabta ceeriin qodidda, xoqidda iyo xoqidda. Marka hore, fiber-ka aasaasiga ah waxaa lagu duugay saxarka ka dib baaritaanka iyo kala soocida. Kadib saxarka waa la garaacayaa, faybarka waxaa kala saara masaxada si loo wanaajiyo awooda isku qabashada ee udhaxeysa alaabada wax soo saarta saxarka. Sababtoo ah cabirka saamiga, adkaanta iyo midabku way kala duwan yihiin, guud ahaan waxay u baahan yihiin in lagu daro wakiilka xoogga qoyan, qiyaasta wakiilka iyo waxyaabaha kale ee kiimikada lagu daro, iyo in la hagaajiyo cabirka foojignaanta iyo qiimaha pH.
2. Wax isku shaandheyn
Waqtigan xaadirka ah, habka wax u sameynta saxarka ayaa ah habka sameynta faakiyuumka. Vacuum forming waa nidaam geerida hoose ay ku dhex daadato barkadda qulqulashada iyo fiilooyinka ku jira barkadda slurry-ka ay si isku mid ah dusha uga saaraan cadaadis korka sarena uu xiran yahay. Waxaan ku qalabeysannahay mashiinka wax qaadista oo isweydaarsada, oo aad ugu haboon soo saarida cabir ballaaran iyo shuruudaha qeexida, shuruudaha dhererka dimoqraadiyada ee warqadaha qoto dheer iyo alaabada balaastigga ah.
Alaabada cadaadiska qallalan waxay u baahan tahay in la qalajiyo, guud ahaan iyadoo la adeegsanayo qalajinta marinka marinka iyo qalajinta filimka. Shirkadeena waxay u isticmaashaa marinka qalajinta qalajinta. Waxyaabaha qoyaanka ee saxarka qoyan ee embriyaha qoyan waxay gaari karaan 50% ~ 75%, ka dib marka caaryada hoose la nuugo oo lagu daro caaryada sare, ka dibna waxaa loo dhimi karaa 10% ~ 12% ka dib qalajinta. Alaabada cadaadiska qoyan guud ahaan uma baahna inay qalalaan.
4. Cadaadis kulul
Ka dib markii wax soo saarka saxarka saxarka asal ahaan la dhammeeyo, ka dibna waxaa lagu cadaadiyaa heerkul sarreeya iyo cadaadis weyn si ay u sameeyaan wax soo saarka wax taaj oo kale oo isafgarad leh, sifooyin farsamo wanaagsan, oo samee qaabka iyo cabbirka heerkulka badeecada, iskuleelka dhumucda derbiga, siman oo fidsan dusha sare. Nidaamka wax-u-sameynta guud ahaan wuxuu qaataa caaryada heerkulka sare (guud ahaan 180 ~ 250 ℃) iyo saxarka cadaadiska sare si loo xakameeyo wax u sameynta saxarka qalajinta ka dib, iyo waqtiga cadaadiska kulul guud ahaan waa 30-60s.
5. Goynta iyo dhammeynta
Ka dib dhammaadka cadaadiska kulul, badeecada waa la jari doonaa si loo helo badeecada la dhammeeyay. Ka dib marka la jarjaro, badeecadaha qaar ayaa lagu farsameyn doonaa howsha boostada iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha, sida daabacaadda suufka, jeexitaanka iyo wixii la mid ah.
6. Baadhitaanka iyo baakadaha
Ka dib dhammeystirka dhammaan tallaabooyinka wax soo saarka iyo wax soo saarka, waxaan leenahay shaqaale xirfadlayaal tayo sare leh si loo baaro badeecada, iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, baabi'inta qaar ka mid ah alaabada aan u qalmin.
Khaanadaha Baako Baako Baako Baako, Sanduuqa Baakadaha Cuntada, Dhammaan Noocyada Kala Dheehista Duubista Mashiinka Xannibaadda, Shaybaarka Saxarka Dyed, Sanduuqa Baakadaha Cuntada Degdega ah, Dheehista Duubista Saxarka Haya,